I-turbine yomoya: iyini, izici nokuthi isebenza kanjani | Ukuvuselelwa Okuhlaza
Amandla omoya angenye yezinto ezibaluleke kakhulu emhlabeni wamandla avuselelekayo. Ngakho-ke, kufanele sazi kahle ukuthi kusebenza kanjani. I- umshini womoya Ingesinye sezici ezibalulekile zalolu hlobo lwamandla. Inokusebenza okuphelele futhi kunezinhlobo ezahlukahlukene zama-turbine kuya ngepulazi lomoya lapho sikhona.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi nge-turbine yomoya, izici zayo nokuthi isebenza kanjani.
1 Yini i-turbine yomoya
2 Ngaphakathi kwama-generator omoya
3 Izinto zomoya ophephela
Yini i-turbine yomoya
I-turbine yomoya iyinsimbi yemishini eguqula amandla omoya abe ngamandla kagesi. Ama-wind turbines aklanyelwe ukuguqula amandla e-kinetic omoya abe ngamandla womshini, okungukuhamba kwe-eksisi. Ngemuva kwalokho, kukhiqizi we-turbine, la mandla womshini aguqulwa abe amandla kagesi. Ugesi owenziwe ungagcinwa ebhethri noma usetshenziswe ngqo.
Kunemithetho emithathu eyisisekelo ye-physics elawula amandla atholakalayo omoya. Umthetho wokuqala uthi amandla akhiqizwa yi-turbine alingana nesikwele sejubane lomoya. Umthetho wesibili uthi amandla atholakalayo alingana nendawo eshanyelwe yabe. Amandla alingana nesikwele sobude bensimbi. Umthetho wesithathu ubeka ukuthi ukusebenza kahle kwezethiyori komoya ophephela kungama-59%.
Ngokungafani nezibhebhe zomoya ezindala zaseCastilla La Mancha noma eNetherlands, kulezi zindawo zokuphefumula umoya ududula izindwani ukuze zizungeze, kanti imishini yomoya yesimanje isebenzisa imigomo eyinkimbinkimbi yokuthola umoya ukuze ibambe amandla omoya kahle. Eqinisweni, isizathu sokuthi kungani i-turbine yomoya ihambisa izindwani zayo iyafana nesizathu sokuthi indiza ihlala emoyeni, futhi kungenxa yesimo somzimba.
Kuma-turbine omoya, izinhlobo ezimbili zamandla e-aerodynamic zenziwa emaceleni e-rotor: eyodwa ibizwa ngokuthi yi-thrust, ebheke ngqo ekuqondeni kokugeleza komoya, enye ibizwa ngokuthi yi-drag, ehambelana nokuqondiswa kokuhamba komoya umoya.
Idizayini yamaphini we-turbine icishe ifane naleyo yophiko lwendiza futhi iziphatha njengeyokugcina ezimeni ezinomoya. Ophikweni lwendiza, enye indawo iyindilinga kakhulu, kanti enye iyisicaba. Lapho umoya ujikeleza ngamabhali okusila alo mklamo, ukuhamba komoya endaweni ebushelelezi kuhamba kancane kunokuhamba komoya endaweni eyindilinga. Lo mehluko wejubane nawo uzokhiqiza umehluko wengcindezi, ongcono endaweni ebushelelezi kunasebusweni obuzungezayo.
Umphumela wokugcina ungamandla asebenza endaweni ebushelelezi yephiko le-thruster. Lo mkhuba ubizwa ngokuthi "umphumela we-Venturi", oyingxenye yesizathu somcimbi "wokuphakamisa", okuyi yona, ichaza ukuthi kungani indiza ihlala emoyeni.
Ngaphakathi kwama-generator omoya
Ama-turbine omoya asebenzisa lezi zindlela ukudala ukunyakaza okuzungezayo ku-eksisi yawo. Umklamo wesigaba se-blade usiza ukujikeleza ngendlela esebenza kahle kakhulu. Ngaphakathi kwe-generator, inqubo yokuguqula amandla ajikelezayo wensimbi abe ngamandla kagesi ayenzeka ngomthetho kaFaraday. Kumele ifake i-rotor ejikeleza ngaphansi kwethonya lomoya, ihlanganiswe nenye i-alternator, futhi iguqule amandla ajikelezayo abe amandla kagesi.
Izinto zomoya ophephela
Imisebenzi eyenziwe yinto ngayinye yile elandelayo:
Ukujikeleza: Iqoqa amandla omoya futhi iwuguqule ube ngamandla womshini ojikelezayo. Ngisho nasezimeni eziphansi kakhulu zejubane lomoya, ukwakheka kwayo kubalulekile ekuphendukeni. Kungabonakala kusukela endaweni edlule ukuthi ukwakheka kwesigaba se-blade kuyisihluthulelo sokuqinisekisa ukujikeleza kwe-rotor.
Uhlelo lokuhlanganisa i-Turbine noma uhlelo lokusekela: guqula ukunyakaza kokujikeleza kwensimbi kukuhamba kokujikeleza kwe-generator ye-generator lapho kuhlanganiswe khona.
Yandisa noma i-gearbox: Ngezivinini zomoya ezijwayelekile (phakathi kuka-20-100 km / h), ijubane le-rotor liphansi, cishe ukuguquguquka okungu-10-40 ngomzuzu (rpm); Ukuze kukhiqizwe ugesi, irotorator ye-generator kufanele isebenze ngo-1.500 rpm, ngakho-ke i-nacelle kufanele ibe nesistimu eguqula ijubane lisuke enanini lokuqala liye kunani lokugcina. Lokhu kufezwa ngomshini ofana no-gearbox osenjinini yemoto, osebenzisa iqoqo lamagiya amaningi ukuzungezisa ingxenye enyakazayo yejeneretha ngejubane elifanele ukukhiqiza ugesi. Futhi iqukethe ibhuleki yokumisa ukujikeleza kwe-Rotor lapho umoya unamandla amakhulu (ngaphezu kuka-80-90 km / h), ongalimaza noma iyiphi ingxenye ye-generator.
Ugesi: Kungumhlangano we-rotor-stator odonsa amandla kagesi, othunyelwa esiteshini ngezintambo ezifakwe embhoshongweni osekela i-nacelle, bese ufakwa kwinethiwekhi. Amandla we-generator ahluka phakathi kwe-5 kW ye-turbine ephakathi ne-5 MW ye-turbine enkulu kunazo zonke, yize sekuvele kukhona imishini engu-10 MW.
Umumo wemoto: Ivumela izingxenye ukuthi zishintshane ukubeka i-nacelle ekuqondeni komoya okhona.
Ukusekela insika: Kuyinto ukusekelwa kwesakhiwo se-generator. Lapho amandla amakhulu ephephela, iba bukhulu ubude bezinhlamvu futhi, ngakho-ke, kuphakama kakhulu lapho kufanele khona i-nacelle. Lokhu kungeza ubunzima obengeziwe ekwakhiweni kombhoshongo, okumele kuxhase isisindo sesethi ye-generator. Ikhaba kufanele futhi libe nokuqina okuphezulu kwesakhiwo ukumelana nemimoya ephezulu ngaphandle kokuphuka.
Ama-paddles nama-anemometers: imishini etholakala ngemuva kwama-gondola aqukethe ugesi; zinquma ukuqondiswa futhi zikala isivinini somoya, bese zisebenza ngamabhande ukuziphula lapho isivinini somoya sidlula umkhawulo. Ngaphezulu kwalesi sibalo, kukhona ubungozi bokuhleleka komoya. Lokhu kuvamise ukuba kube wuhlobo lwe-Savonious turbine design.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge-turbine yomoya nezici zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Amandla avuselelekayo » Amandla omoya » I-turbine yomoya
Amandla enyukliya: izinzuzo nezinkinga